Ywar Thar Lay (YTU): 2/1/17
Posted by ywartharlay-ytu at 4:17 PM0comments Links to this post
ရေးမယ်ရေးမယ်နဲ့ မရောက်သေးတဲ့ ဇင်းမယ်ဆိုတဲ့ ချင်းမိုင်မြို့ပေါ့။ ဆူခိုထိုင်ကနေ ဇင်းမယ်ကို ဘတ်စ်ကားနဲ့ စီးလာကြတယ်။ လေးနာရီကြာတဲ့အခါ ဇင်းမယ်ကိုရောက်တယ် (စာမှာတော့ ဆယ်လလောက်နေမှ ဇင်းမယ်ကို ရောက်တော့တယ်)။ လမ်းကတော့ ဖြောင့်ဖြူးချောမွေ့နေတာပါပဲ.
ဇင်းမယ်မှာ တည်းဖုို့နေရာကို trip advisor ကနေ ရှာထားပြီး ဘကြီးကို ဘွတ်ကင်တင်ခိုင်းထားပါတယ်။ အခန်းကိုးခန်းပဲရှိပြီး တနိုင်လုပ်ငန်းငယ်လေးမို့ အွန်လိုင်းဘွတ်ကင် မရှိသေးဘူး။ အခန်းက သန့်ရှင်းကျယ်ပြန့်ပြီး ဈေးလည်းချို၊ နေရာက အချက်အချာကျတဲ့ နေရာမှာပါ...
အခန်းမှာ အထုပ်တွေချပြီးတဲ့အခါ အခန်းဘေးကပ်ရပ်ကနေ ညစာစားရင်း ရိုးရာအကတွေ ကြည့်မယ့် အစီအစဉ်နဲ့ နောက်နေ့ မနက် ရွှေတြိဂံနယ်မြေသွားတဲ့ အစီအစဉ်တွေကို ဝယ်လိုက်ကြတယ်။
သိပ်မကြာခင်မှာ ညစာစားပွဲသွားဖို့ ကားလာကြိုပါတယ်။ ကျယ်ပြန့်တဲ့ ဝန်းကြီးတခုမှာ မီးပုံးရောင်စုံတွေနဲ့ သီတင်းကျွတ်ညတခုလို စည်ကားနေတယ်။ ဧည့်ကြိုတွေက ကျနော်တို့ ဝယ်ထားတဲ့ လက်မှတ်အချိန်နဲ့ ကိုက်တဲ့ နေရာတခုကို လိုက်ပို့ပေးကြလေရဲ့။
ညီညာပြန့်ပြူးတဲ့နေရာမှာ ထိုင်ဖုံတွေ ကိုယ်စီကိုယ်ငှနဲ့ တောင်ပိုင်း ဇင်းမယ်မြို့ရဲ့ ရိုးရာညစာစားပွဲဟာ ခမ်းနားနေတယ်။ အသီးသီးအသက လက်မှတ်ဈေးနှုန်းအလိုက် နေရာ ချထားပေးပြီး မကြာခင်မှာ စည်တော်ရွမ်းပြီး ပွဲကိုစတယ်။
ညစာစားပွဲကတော့ တောင်ပိုင်းရိုးရာ ဟင်းချက်တွေနဲ့ စားလို့ သိပ်မြိန်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဝက်သားဟင်းချက်လေးကတော့ မြန်မာ့ ပါးစပ်နဲ့ ကွက်တိ။ စားလိုက် ပြန်ဖြည့်လိုက်နဲ့ ကပွဲ အစအဆုံး စားပွဲထိုးတွေဟာ လွန်းထိုးလို့ နေတော့တယ်။
ရိုးရာကပွဲဟာ ထိုင်းနဲ့မြန်မာ ရောစပ်နေပါတယ်။ နယ်စပ်မို့လို့ ဆိုတဲ့ အပြင် ယဉ်ကျေးမှုကို အငှားပြနေသလိုခံစားမိစေတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက်ကတော့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပါ မြင်ရတယ်လို့ စိတ်ထင်ရောက်စေပေမယ့် ကျနော့အတွက်တော့ တကယ့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အစစ်အမှန်မဟုတ်တဲ့ အရာတွေမို့ မကျေနပ်စိတ်တခုနဲ့ ပွဲအပြီးထိ ကြည့်နေခဲ့ရတယ်.ပွဲအပြီးမှာ ဧည့်သည်တွေကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး စင်ပေါ်တက် ကခိုင်းပါတယ်။ တက်သည့် ပညာမနေသာဆိုသလို ဘကြီးကလည်း မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် ယိုင်တိုင်တိုင်အကနဲ့ ဝင်ရောက်ဖျော်ဖြေပါတော့တယ်။
စင်မြင့်ထက်က ကပွဲအပြီးမှာ ခဏနားချိန်ပေးတယ်။ ကုန်သွားလိုက်ထပ်ဖြည့်လိုက်နဲ့ ထမင်းနဲ့ ဟင်းတွေက ဗိုက်တလုံးထက် မဆန့်နိုင်တော့ပြီမို့ အားလုံးလည်း လက်မြှောက်အရှုံးပေးလိုက်ကြပြီ။ ခြေဆန့်လမ်းလျှောက်ရင်း ရိုးရာ အသုံးဆောင်တွေ ရောင်းတဲ့အစီအစဉ်က တော်တော်လေး ဈေးကွက်စီးပွားရေး အမြင်ရှိပုံပါပဲ။
နောက်တပိုင်းကိုတော့ မီးပုံပွဲလို ရိုးရာအကတွေအဖြစ် တိုင်းရင်းသားတွေက ကပြမယ့် နေရာကို ထပ်ရွှေ့ကြတယ်။ ထင်းမီးပုံ ပုံစံလုပ်ထားတဲ့ နေရာတခုပေါ့။ တိုင်းရင်းသားတွေအဖြစ် ကပြမယ့် သူတွေဟာ ရိုးရာဝတ်စုံတွေ ပြောင်းသွားကြပေမယ့် ဒီလူက ဒီလူတွေပါပဲ။ ငိုက်မြည်းသမ်းဝေ နေတဲ့ ကပြသူ ကလေးငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါ စိတ်ထဲမှာ ခံစားချက်တစွန်းတစ ဖြစ်စေတယ်။ ငယ်ရွယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆော့ကစားရမယ့် အရွယ်မှာ စီးပွားရှာသူတယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီဆိုတဲ့ ခံစားချက်က စိတ်ကို အတိုင်းမသိ လေးပင်စေခဲ့တာ။
ကပွဲကအပြန် ဘယ်မှ လျှောက်မသွားကြပဲ ဟိုတယ်ကို စောစောပြန်အိပ်ကြတယ်။ မနက်အစောကြီး ထရမှာဖြစ်ပြီး ရွှေတြိဂံရယ် ချင်းယိုင်ကဘုရားဖြူရယ်ကို သွားဖို့ ကားလာခေါ်မှာမို့ပါ. စာထဲမှာ ရင်းနှီးပြီးဖြစ်တဲ့ ဇင်းမယ်ဆိုသည် ညိုတဲ့မြို့ကတော့ အပြင်မှာ ခပ်စိမ်းစိမ်းပဲ ရှိနေခဲ့တယ်.....